Baaritaano caafimaad oo bilaash ah oo Garowe laga fulayay, iyo bulshada oo tilaabadaasi u riyaaqday. – Radio Daljir
Luulyo 15, 2012 11:14 b 0
Garowe, July, 16 ? Baaritano ?caafimaad oo bilaash ah ayaa labadii maal-mood ee ugu dambeeyay waxaa laga fuluyay magaalada Garowe, mashruucaan ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka Puntland, jaamacada bariga Africa iyo shirkada isgaarsiinta Golis Telecom.
Labadii cisho oo baaritaannadu ay socdeen ayaa waxaa bukaannada laga baarayay cudurada dhiig-karka, iyo sonkorta, iyadoo hawl-galkaan ay fulinayeen koox caafimaad oo arrintaan loo xirsaaray. Hawl-galka baaritaan ayaa waxaa laga fulinayay goobaha bulshadu ay ku badanyihiin sida suuqyada, iyo meelaha ay bulshooyinku isugu-yimaadaan.
Radio Daljir oo cod-baahiyaha la dhex-qaaday dadkii ka faa?iidaystay baaritaannadaan lacag la?aanta ah ayay dadku waxay u sheegeen fursadaan inay tahay mid aad u wanaagsan, waxaana baaritaannada barbar-socday talooyin caafimaad oo qofkii laga hulo xannuunadaas lasiinayay.
Hawl-galkaan caafimaad ee bilaashka ah waa? midkii ugu horeeyey ee noociisa ah oo laga fuliyo magaalada Garoowe, waxaana arrintaan ay ku dhiiri-galinaysaa hay?ado badan inay ka qayb-qaataan hormarinta arrimaha caafimaadka iyo ka qayb-galka hormarka deegaanka.